I-Salonist Spa kunye neQonga loLawulo lweSalon: Ukuqeshwa, Uluhlu lweempahla, ukuThengisa, ukuHlawula, kunye nokunye | Martech Zone
I-Salonist yisoftware yesalon enceda i-spa kunye nee-salon ukulawula ukubhatalwa, ukubiza amatyala, ukubandakanya abathengi bakho, kunye nokwenza izicwangciso zokuthengisa. Iimpawu zibandakanya:
Ukusekwa kweSpecial kunye neeSalon
Ukubhukisha kwi-Intanethi -Sebenzisa i-smart Salonist kwi-Intanethi yokubhukisha isoftware, abathengi bakho banokucwangcisa, baphinde bacwangcise ixesha, okanye bacime amadinga naphi na apho bakhoyo. Sinezinto zombini ezinokubakho kwiwebhusayithi kunye nokusetyenziswa kweapps ezinokudityaniswa ne-Facebook kunye ne-Instagram. Ngale nto, inkqubo yokubhukisha iyonke iyasebenza ngokupheleleyo. Akukho kubhukisha kabini. Ndlela-ntle ekuboniseni umboniso kunye ne-Salonist.
Indawo yokubhloka -Misa ukuchitha ixesha labasebenzi kunye nabathengi ngokunika ixesha elingafumanekiyo kwikhalenda yakho. Nge-block blocker zokubhukisha kwi-Intanethi, unamandla okubonisa iindawo ezikhoyo kuphela, ezithintela ukubhukisha okugqithileyo ngexesha elithile.
UkuBhukisha iiyure ezingasebenziyo -Nika abathengi bakho ubhetyebhetye ngakumbi ekubekeni ixesha lokuqeshwa, nangaphandle kweeyure zeshishini, ngokusebenzisa isoftware yolawulo. Ngeyona software ingcono ye-salon, ishishini lakho linokuqhubeka lihamba naxa ungaxhunyiwe kwi-intanethi. I-Salonist yenzelwe ukugcina ukungena komthengi kungaguquguquki, ngelixa zibhukisha ngokulula ngalo naliphi na ixesha naphi na.
Iphakheji yokubhukisha -Konwabele inkululeko yokwenza iipakeji zeenkonzo ezahlukeneyo ngezixa ezifanelekileyo. Ngale software yokulawula abathengi, unokonyusa intengiso kunye nengeniso kwizitudiyo zakho ngokwenza kube lula kubathengi ukubeka indawo ngokubhekisele kukhetho lwabo. Isoftware ye-salonist ikwabalulekile ekonyuseni ukunyaniseka kwabathengi bakho ngeephakheji zeesalon ezingenamthungo ezandleni zabo.
Ukubhukisha ubulungu -Nika abathengi bakho inkuthazo yokuhlala bethembekile besebenzisa ubulungu kubhukisho lwe-Intanethi kunye nenqaku lokucwangciswa. Kwi-Salonist, abanini be-salon banokuqhuba inkqubo yokunyaniseka enika amalungu izaphulelo zeenkonzo ezithile. Oku kuye kwaqinisekiswa ukuba kuqhuba ukukhula kwe-salon kunye nokunyusa amazinga okugcina abathengi.
Yamkela Intlawulo -Uya kuba nomtsalane kangakanani ukuba ube nesoftware efanelekileyo yokwenza ukwamkela iintlawulo umoya opholileyo? I-Salonist iza newijethi yokubhukisha ekwi-intanethi edityaniswe nePaypal, iStripe, kunye ne-Authorize.Net. Abanini beSalon banokufumana intlawulo yeenkonzo zakho ngokungqamanisa ukuthenga kunye nale widget kwisoftware yethu yolawulo lwesalon. Unako nokwamkela zonke iintlobo zeentlawulo kunye nendawo yethu yokuthengisa ehlanganisiweyo.
Ukuthengisa iiSpas neeSalons
email Marketing -Thumela imibuliso yesikhumbuzo, izicwangciso zobulungu, kunye nokuqinisekiswa kokuqeshwa kwimizuzu engaphantsi kwemihlanu usebenzisa iinkonzo zentengiso ye-imeyile kaSalonist. Ukuthengisa nge-imeyile yindlela elungileyo yokunyusa ukuqeshwa kweenkonzo zakho zokuzonwabisa kunye ne-spa. I-Salonist imalunga nokuphucula amaxabiso okugcina abathengi kunye nokwenza ingeniso ephezulu kwinkampani yakho.
Ulawulo loPhononongo -Uphononongo yindlela emnandi yokubonisa umhlaba ukuba wenza into elungileyo. Inceda ukuba ukhusele abathengi abaninzi ngelixa ubagcina bethembekile. Isalonist yokuchongwa kwesoftware ikwenza ukuba ufumane ingxelo yexesha lokwenyani kubathengi bakho kwiimveliso nakwiinkonzo zakho. Ngezinto ezithunyelwayo ezithunyelwa ngeSMS kunye ne-imeyile kwii-smartphones zazo kulawulo lwabathengi olufanelekileyo, ungahlala uqhagamshele kubathengi bakho.
Ulawulo lweKhuphoni -Ukuba kukho into enye abathengi abayithandayo, ziinkonzo zasimahla. Buyekeza abathengi bakho ngenkxaso yabo ngesaphulelo kunye nokunikezelwa kwekhuphoni kuyo yonke iodolo yokuhlaziya. Akukho nkqubo inzima ibandakanyekayo. Ungalilawula eli lungelo kwi-Salon kunye ne-Spa Discons Coupons tab kwi-smart salon software. Gcina abathengi bakho bengena noluhlu lwezaphulelo.
Cards Cards -Nika abathengi bakho ithuba lokunika isipho abo ubathandayo ngeenkonzo zakho kwizihlandlo ezikhethekileyo. Nokuba sisikhumbuzo okanye umbhiyozo wokuzalwa, ikhadi lesipho elenzelwe umntu kwi-Salonist linokukunceda uzibandakanye nabathengi abanokubakho. Iqonga libazisa ngoko nangoko nge-imeyile okanye ngeSMS.
Inkqubo yokunyaniseka -Iinkqubo zokunyaniseka kulawulo lwabathengi yenye inkqubo yomvuzo omkhulu kubathengi bakho. Oku kuya kunceda ekuphuculeni ukuphindwaphindwa kotyelelo lwabo. Jonga isoftware yeSalonist yokufikelela ngokulula kwiinkqubo zokunyaniseka eziza kukhawulezisa ukuhanjiswa kwabathengi bakho, ukuzibandakanya kunye nokhuseleko.
Imikhankaso yeSMS -Nciphisa ukubakho kokungabonisi kubathengi bakho. Isalonist ikunceda ukuba uhlale unxibelelana nabo ngokwenza izikhumbuzo zokuqeshwa, ukuzibandakanya kwabathengi, imikhankaso yokwazisa, nokunye okuninzi. Khulisa ishishini lakho le-salon ngokungena kwincoko nabathengi bakho kwaye wazi ngqo ukuba bafuna ntoni.
Ukongeza kuseto lokuqeshwa kunye nentengiso, I-Salonist Ikwabandakanya ulawulo lwabathengi, ukuqeshwa kwangaphambili, ulawulo lwempahla, ulawulo lweendleko, ulawulo lwendawo, ivenkile ekwi-intanethi, uhlalutyo, indawo yentengiso, usetyenziso lweselfowuni, iifom ze-Intanethi kunye neengxelo ezineenkcukacha. Isoftware yesalon ifakelwe yonke into oyifunayo ukukhulisa ingeniso, ukugcina ixesha, ukuphucula ukubonakala kwegama, kunye nokwenza izigqibo ezifanelekileyo kwishishini lobuhle. Jonga amanqaku esi sixhobo sithandwa kakhulu kwaye ulungele ukwenza ishishini lakho libe ngcono.
Abaxhasi babo baquka iivenkile zokucheba iinwele, iisaluni zeenwele, i-massage therapists, i-spon salon, i-spas, i-salons zabatshatileyo, isoftware yezonyango, isoftware yolusu, amagcisa we tattoo, iindawo zokuqeshisa izindlu, iisalon zokulungisa isikhumba kunye nokuzilungisa izilwanyana.
Qalisa uvavanyo olusimahla
Ukubhengezwa: Ndililungu le I-Salonist.
tags: Ulusu olukhathalayo ngobuhleUhlalutyouseto lokuqeshwaindawo zokuchebaabaqeshi bemikhosiIisaluni zabatshatiUlawulo lwabathengiUlawulo lweendlekoiinwele zekhayalawulo lwezintoulawulo lwendawoiingcali zokwenza umthamboIsoftware yezonyangosicelo se sithuthiiizipho zenziphoiifom ezikwi-intanethionline storeabalungisa izilwanyana zasekhayainqaku lentengisoposUkuqeshwa kwangaphambiliukuthengisa salonSpaindawo yokwenza isikhumbaamagcisa tattoo